Fialamboly sy fanabeazana : « Tsy tokony hatao lafo ny boky angano », hoy i Ny Eja | NewsMada
Fialamboly sy fanabeazana : « Tsy tokony hatao lafo ny boky angano », hoy i Ny Eja
Tsy tokony hohadinoina ny fanabeazana ao anatin’ny fialamboly samihafa ataon’ny ankizy amin’izao fialan-tsasatra izao. Anisan’ireny, ohatra, ny angano. Noho izany, tsy tokony hatao lafo ny boky mitantara angano, araka ny nambaran’i Ny Eja, mpanoratra, mpamorona angano sady fantatra amin’ny fitantarana angano ihany koa. Dinidinika.
Gazety Taratra (*): Manao ahoana ny fandraisan’ny zaza malagasy ny angano amin’izao fotoana izao?
Ny Eja (-): Azo lazaina ho miroborobo ihany ny angano eto amintsika, ankehitriny. Efa maromaro ny mpitantara angano, na amin’ny fahitalavitra io na amin’ireny foibe ara-kolontsaina ireny, toy ny hotanterahiko ny 5 jolay izao etsy amin’ny IFM Analakely. Midika izany fa efa miverina mahaliana indray ny angano, izay tsy fialamboly fotsiny fa tokony ho fanabeazana.
* Mitohy ve ny famoronana angano malagasy sa ny tany aloha tany ihany no averina tantaraina?
– Izaho manokana, mamorona angano, saingy tsy angano no filazako azy fa tantarakely. Ny antony, raha ny marina, tsy fantatra ny olona namorona ireny angano malagasy ireny. Ny angano mahakasika ny tontolo iainana sy angano mampahafantatra ny biby sy ny zavamananaina eto Madagasikara no tena foroniko. Tsy maintsy misy fanabeazana izany rehetra izany. Ankoatra izany, rehefa mitantara angano aho, ireo angano malagasy mbola tsy misy mpahalala nefa mifono fananarana no ampitaiko amin’ny ankizy. Amin’ny maha reny sy amin’ny maha olom-pirenena ahy, raisiko ho adidy izany.
* Nahoana no angano mahakasika ny tontolo iainana sy ireo harena voajanahary eto amintsika no nosafidinao?
– Amiko, mbola tsy fahita loatra ireo. Manaraka izany, manan-karena i Madagasikara ary tokony hasongadina sy hampahafantarina ny taranaka izany. Raha misy ny fikambanana miahy ireo harena voajanahary ireo te hanentana ny ankizy sy ny tanora, vonona aho hamorona angano na tantarakely mahakasika izany.
* Ankoatra ny fitantarana angano, manao ahoana kosa ny boky ahitana ireny karazana tantara ho an’ny ankizy ireny eto amintsika?
– Misy ny boky, saingy tsy tokony hatao lafo izy ireny mba tsy hampihemotra ny mpividy, ny ray aman-dreny. Ankoatra ny boky, mampiofana mpampianatra amina sekoly sy foibe aho mikasika ny angano sy ny fitantarana angano.
* Misy anefa ny olana sedrain’ny mpanoratra eto amintsika: ny fahalafosan’ny famoahana boky. Inona ny vahaolana manoloana izany?
– Iharan’izany ihany koa izahay. Izaho aza, naleoko mihitsy mianto-tena na manao “auto-édition” matetika rehefa mamoaka boky ka rehefa misy manao kaomandy vao mamokatra.
Dinika nangonin’i Landy R.